VaNgarivhume Votenderera neMatunhu Ose Vachisangana neVatsigiri Vavo
Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe, VaJacob Ngarivhume, vanoti chirongwa chavo chekusangana nevanhu mumatunhu ose emunyika vachivakurudzira kunonyoresa kuvhota chiri kutsigirwa zvikuru.
Asi vanoti misangano yavo, iyo vari kuitira mudzimba, iri kuvhiringidzwa sezvo vanhu vari kuchema nerekuti vari kutyisidzirwa nemapurisa pamwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu PF, zvikuru kuMashonaland Central uko vari kushanyira pari zvino.
VaNgarivhume, avo vakatanga hurongwa hwavo uhwu mwedzi vapera vanoti vari kuita misangano iri kubudirira kubva mumatunhu avakashanyira eMatabeleland North, Matabeleland South pamwe neBulawayo, kusanganisira nedunhu reMashonaland Central uko vari kushanya pari zvino.
VaNgarivhume vanoti misangano iyi iri kuvapa mukana wekukurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kunonyoresa kuitira kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Vanoti vari kutorawo mukana uyu kuudza nhengo dzavo pamusoro pehurongwa hwekuumba mubatanidzwa wemapato anopikisa.
Svondo rinouya vanoti vari kutarisira kupinda mudunhu reManicaland vasati vaenda kuMasvingo neMashonaland East.
Hurukuro naVaJacob Ngarivhume